Turkiga: In Midowga Yurub uu jaro dhaqaalaha AMISOM waa khalad weyn | Baydhabo Online
Turkiga: In Midowga Yurub uu jaro dhaqaalaha AMISOM waa khalad weyn
In midowga Yurub ay jaraan qeyb kamid ah dhaqaalaha lagu bixin jirey howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waa khalad weyn, madaxweynaha dalka Trukiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidaa sheegay xilli Arbacadii uu booqday Uganda.Dowladda Uganda ayaa sheegtay in bishii la soo dhaafay ay ka fikireysay sidii lagu sii wadi lahaa howlgalka Soomaaliya iyadoo 20% midowga Yurub uu jaray dhaqaalaha AMISOM.
Midowga Yurub ayaa $200 million ku bixin jirey sanadkasta howlgalka AMISOM ee Soomaaliyaa kaas oo keentay in la wiiqo awooda kooxda Al-shabaab isla markaana dowladda Soomaaliya ay sameyso horumar balaaran.
Booqashada madaxweyne Erdogan ee Uganda ayaa u jeedkeedu yahay in labada dal ay yeeshan xiriir ganacsi iyo mid dalxiis iyadoo sidoo kale booqashadiisa dalalka Afrika uu abuuri doono fursado kale sida dalalka Kenya iyo Soomaaliya oo uu booqan doono.
Arbacadii, ayaa saraakiil Uganda u dhashay waxaa ay sheegeen in madaxweyne Erdogan iyo dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni waxaa ay yeesheen kulan ayagoo wada saxiixday heshiis iskaashi oo ay kamid tahay dalxiiska, difaac, socdaalka iyo waxbarashada. Turkiga ayaa sheegay in Uganda uu $600 million ku maalgelin doono warshadaha soo saara dalagayada beeraha iyo kuwo kale ee soo saara tamarta.